Iibso khadka tooska ah | Ururka Horumarinta Dhaqanka ee Ota Ward
Markaad u timaaddo mashruuca ay soo qabanqaabisay ururku, fadlan calaamadee "Ku saabsan dadaalka ururku ugu jiro ka-hortagga faafidda cudurka waqtiga waxqabadka" iyo "Codsiyo loo dirayo qof kasta oo u yimaada waxqabadka" ka hor intaadan imaan goobta.
Ku saabsan dadaalka ururka ee kahortaga faafida cudurka waqtiga waxqabadka
Codsi qofkasta oo u yimaada waxqabadka
Ka sii qabsashada internetka
Waa la heli karaa 24 saacadood maalintii. (Marka laga reebo waqtiga dayactirka laga bilaabo 3:4 am ilaa XNUMX:XNUMX am)
Diiwaangelinta xubinnimada ayaa loo baahan yahay kahor si loo isticmaalo adeegga.
Kuraasta la keydsaday, waxaad dooran kartaa lambarka kursiga aad jeceshahay.
Fadlan ka soco waxyaabaha soo socda ilaa bogga iibka internetka.
Laga bilaabo Abriil 3, sanadka 4aad ee Reiwa, "Shuruudaha Adeegsiga ee Adeegyada Dhiirrigelinta Dhaqanka ee Ota Ward" waa la beddeli doonaa.
Fadlan hubi waxa ku jira.
Ururka Ota Ward ee Dhiirrigelinta Dhaqanka Shuruudaha Isticmaalka ee Internetka (2021 dib u eegis)
支 払 い 方法
Kaarka amaahda (VISA / Master / JCB / AMERICAN EXRESS / Diners Club)
Lacag caddaan ah (kaliya marka aad tikidhada ka helayso FamilyMart)
Sida loo helo tigidhka
Rasiidka taleefanka gacanta
(Tikidka elektarooniga ah)
Boos celis ayaa la sameyn karaa ilaa 19:00 maalin ka hor waxqabadka.
Ma jiraan wax diiwaangelin ah oo lagu isticmaalo adeegga Tigidhada MOALA.
Information Waxaad ka hubin kartaa macluumaadka iibsiga Boggeyga ee Ota Ward Dhiirrigalinta Dhaqanka ee Ururka tikidhada khadka tooska ah.
・ URL-ka macluumaadka tigidhada waxaa loo diri doonaa cinwaanka emaylka (taleefanka casriga ah) ee diiwaangashan hal toddobaad kahor waxqabadka.
Fee Lacag gooni ah oo ah 150 yen ayaa tikidhkiiba laga qaadi doonaa.
* Telefoonada gacanta iyo kiniiniyada aan ka aheyn kuwa casriga ah lama isticmaali karo.
Fadlan ku shaqee "Fami Port" oo ku rakiban dukaanka oo ka soo qaad diiwaanka lacagta.
Lambarka 1 (lambarka shirkadda)30020") Iyo lambarka labaad (nambarka sarrifka (2 lambar oo ka bilaabmaya 8)) ayaa loo baahan yahay.
Halkan guji si aad u isticmaasho rasiidka FamilyMart
Boos celinta waxaa la sameyn karaa ilaa 2 toddobaad kahor taariikhda waxqabadka.
・ Waxaan ku gaarsiin doonnaa Gaadiidka Yamato.
・ Haddii aad maqnaato, waxaa jira adeeg gaarsiinta oo leh taariikh iyo waqti cayiman.
Marka lagu daro khidmadda tikidhada, dhoofinta khidmadda ah 450 yen ayaa laga qaadi doonaa tikit kasta.
Tigidhada lama beddeli karo, lama beddeli karo ama lama soo celin karo.
Tigidhada dib looma soo saari doono duruuf kasta ha noqotee (lumay, gubatay, dhaawacantay, iwm).
Mabda 'ahaan, habka qaabilaadda ee lagu go'aamiyay xilliga wax iibsiga lama beddeli karo.
Gaarsiintu waa mid gudaha ah oo keliya.Maraakiibta dibedda
Haddii aadan ka helin diritaanka emaylka otomaatiga ah ee adeegga tikidhada tooska ah ee laga helo Delivery ka imanaya serverka xogta guud ee caadiga ah waxaa lagu xukumi karaa inuu yahay emayl qashin ah.Fadlan tixraac kuwan soo socda hababka taageerada caadiga ah.
Sida loo isticmaalo tikidhada internetka
Fadlan tixraac fiidiyaha soo socda sida loo diiwaan geliyo loona iibsado tikidhada internetka.
Sida loo diiwaangeliyo xubin tikidhada khadka tooska ah
Sida loo iibsado tigidhka khadka tooska ah
Ogeysiis ku saabsan mamnuuca tigidhada iibka
Ku saabsan mamnuucida iibinta tikidhada